China Lehilahy lamaody camouflage hoodie fanamboarana sy orinasa | ISAPPARELA
VESTA FASHION NY VEHIVAVY
VESTA FAHION NY VEHIVAVY
Coolguy gym tank top amin'ny h ...
Tank top hozatra gym ho an'ny ...
Akanjo fanaovana fanatanjahan-tena Akanjo lehilahy Gym S ...
Fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy vaovao ...
Akanjo tanky vaovao an'ny lehilahy vaovao
Fiolahana lava ho an'ny lehilahy ...
Miolakolaka ny laharana farany an'ny lehilahy ...
Vest miala sasatra lava amin'ny ...
Sl fohy fohy an'ny lehilahy ...
Fanjaitra fohy vita amin'ny tanany fohy ...
T shirt fohy tanana fohy maina
Fashion lehilahy 4/3 sle ...
Logo manokana 100% landy vita amin'ny landihazo ...
Hoodie camouflage lamaody ho an'ny lehilahy
Fomba: hoodie camouflage lamaody ho an'ny lehilahy
Loko: ny lisitry ny loko na ny loko manokana
Lamba: Terry ； volon'ondry na lamba namboarina
Ny Logo: pirinty vita amin'ny lamba landy, pirinty niomerika mivantana, famindrana hafanana, amboradara, badge, pataloha pvc, pirinty hita taratra, logo TPU, applique
Marika: FJUN na Custom
Fiandohana: Nanchang, Sina
Endri-javatra: malefaka & mahazo aina, Anti-ketrona, Anti-pilling, Anti-Shrink, maharitra, afaka miaina
Azonao atao ny manampy ny volavolao amin'ireto fomba ireto ary mifanentana amin'ireo kojakoja ilainao hitondranao endrika hafa.20 + endrika vaovao isan'andro. Manantena amin'ny ISA, azonao atao ny mamorona ny volavolao ho tena mandresy ary mahazo ny tsena; Tongasoa eto amin'ny NC ISA INDUSTRY AND TRADE COMPANY. Hanome anao ny serivisy tsara indrindra izahay. Ity fomba ity dia tsara hanehoana ny endrikao, na ao an-trano ianao na any ivelany, dia lamaody tena lamaody.
Lamba: volon'ondry misy taolan-tehezana
Sleeve: tanan'akanjo lava
Akanjo ahazoana aina sy maina haingana
Hita amin'ny loko isan-karazany
haben'ny fonosana: 35X35X2 cm
Fampahalalana momba ny fanasana
Ny mari-pana amin'ny rano fanasana dia tsy tokony ho avo 25 degre
Sasao amin'ny loko toa azy ihany
Sasao amin'ny rano ara-dalàna
Ireo zavatra vita pirinty dia tsy tokony nohosorana lena na maina
Aza hosasana vy ny akanjo mba tsy hikororohana azy ireo
Lamba Cotton 100%
Lanjan'ny lamba 280g-350g
Toetoetra malefaka sy mahazo aina, Anti-ketrona, Anti-pilling, Anti-Shrink, maharitra, afaka miaina
Fotoana santionany 2-7 andro fiasana
Fepetra momba ny varotra FOB, CIF, EXW, DDP
Fepetra fandoavana T / T, Western Union, L / C, PaypalPayment fandoavam-bola 30% mialoha, fandanjana 70% alohan'ny fandefasana
Fandefasana Amin'ny alàlan'ny express, amin'ny rivotra sy amin'ny ranomasina
Fonosana Fonosana amin'ny baoritra fanondranana mahazatra na amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
1. Mpitondra entana any Nanchang any Sina izahay mandritra ny 23 taona mahery.
2. Izahay dia manome serivce tokana ho an'ny famolavolana hatramin'ny fandefasana.
3.Manana fifehezana mahery vaika amin'ny rojom-panomezana izahay. Mandamina lamba / fitaovana izahay, mifehy ny kofehy ka hatrany amin'ny lamba vita hatramin'ny farany. Ny serivisinay manomboka amin'ny famolavolana / mockup ka hatrany amin'ny prototype voalohany, PPSample, famokarana betsaka, mandra-pisavana sy fandefasana alohan'ny fandefasana.
4. Manana ekipa R&D, QC, QA, Documatary manokana ary ekipa Sales izahay. Ny tanjonay dia ny hijery sy hamaha izay mety ho olana alohan'ny famokarana sy ny fandefasana entana.
5. Ny orinasanay dia manana mari-pankasitrahana BSCI, SEDEX ary Otex-100, fitsapana SGS toy ny faharetan'ny loko, ny fihenan-tsofina, ny fanoherana ny pilina sns.
6. Manana ny varotra ambongadiny manokana izahay amin'ny zotra.Pls zahao www.isapparels.com ny habetsaky ny 1000 pcs isaky ny entana.
7. Matetika izahay dia manatrika fampisehoana varotra manan-danja toy ny Las Vegas, Canada, Hk ary Canton Fair.
Loko azo isafidianana
Manoro hevitra ny mpanjifantsika izahay hisafidy tsara ny loko mety, toy ny araka ny loko Pantone Colors. Ianao koa dia tongasoa handefasana santionany aminay hanamafisana ireo loko.
Tsy tokony hanome hevitra anao izahay fa maka sary amin'ny alàlan'ny telefaona finday fotsiny mba hisorohana ny tsy fitovian'ny loko, indrindra raha mila loko tena marim-pototra ianao. Araka ny fantatrao, ny loko dia mety tsy hitovy amin'ny faritra manodidina ny jiro.
Teo aloha: Ho an'ny sublimation akanjo ho an'ny lehilahy
Manaraka: Akanjo polo lehilahy milay vaovao
Hoodies sy akanjo ba an'ny lehilahy
Lehilahy manao akanjo lava be loatra ...
Akanjo mahazatra an'ny lehilahy
Lehilahy mihoatra ny haben'ny lehilahy ...
Fashio an-dalambe ho an'ny lehilahy ...
Akanjo lahy fashi ...
Akanjo pataloha polita ...